Sawirro+Codad:Wafdi Ka Socday Xarakada Al Shabaab oo Kormeer Ku Tagay Magaalooyin iyo Deegaanno Katirsan Gobolka Mudug.
Monday November 14, 2016 - 17:18:23 in Wararka by
Mas'uuliyiin ka socotay wilaayaatka Islaamiga Galguduud iyo shabeellaha dhexe ayaa socdaal ku tagay deegaanno iyo degmooyin katirsan gobolla Mudug ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya.
Socdaalkaan oo ahaa mid bulshada lagu dhiiri gelinayay in ay isbarbar taagto ku dhaqanka shareecada Islaamka waxaa qeyb ka ahaa Odayaal dhaqameeyo iyo abwaana Soomaaliyeed.
Mas'uuliyiin ay kamid ahaayeen Sheekh Xasab Yacquub Cali Waalliga Galguduud, Sheekh Yuusuf Kaba Kutukade Waaliga Sh/dhexe iyo Sheekh Abuu Cadnaan Waaliga Mudug ayaa shacabka ku dhaqan magaalooyinka Xarardheere iyo Jowllo kula hadlay fagaarayaasha iyo Masaajidda waxayna uga warbixiyeen halka uu marayo dagaalka ka dhanka ah ciidamada gumeysiga ee Soomaaliya kusoo duulay.
Saraakiisha ka socota Shabaabul Mujaahidiin ayaa shacabka ku dhaqan gobolka Mudug kula dardaarmay in ay kasoo dhalaalaan kaalintooda ku aaddan halganka lagula jiro ciidamada Xabashida Itoobiya iyo xulufadeeda AMISOM.
Kulamada oo ka dhacay Masaajidda iyo fagaarayaasha waxaa ka qeyb galay qeybaha kala duwan ee Bulshada gobolka Mudug, salaadiin iyo Abwaano soomaaliyeed ayaa iyana qeyb ka ahaa socdaalka lagu taageerayay ku dhaqanka shareecada Islaamka ee Mudug.
Abwaaniinta socdaalka qeybta ka ahaa waxaa kamid ahaa Abwaan Taakoow Macalin Ciise iyo Abwaaniin kale kuwaasi oo gabayo guubaabo xambaarsan ka jeediyay fagaarayaasha gobolka Mudug.
Halkan ka dhageyso Kalimadda Sheekh Xasan Yacquub MP3
Halkan ka dhageyso Kalimadda Sheekh Abuu Cadnaan+Gabay MP3
Ciidamo katirsan Nabad sugidda oo Gadood ka sameeyay Muqdisho.
Askari katirsanaa maamulka 'Somaliland' oo lagu dilay gobolka Awdal.
Wasiir katirsan maamulka Somaliland oo laga helay Carona Virus.
Askar katirsan dowladda oo lagu dilay Muqdisho iyo Beledweyne.
Askari katirsan maamulka Puntland oo dad shacab ah ku dilay Gobolka Mudug.